Kedu ka ịgba ịnyịnya ígwè si agbanwe ahụ nwaanyị? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Nwanyị na - agba ịnyịnya - kedu ka ị ga - esi kpebie
Kedu ka ịgba ịnyịnya ígwè si agbanwe ahụ nwaanyị?
Cygba ígwèna-ewuli ahụ ike
Mmegide mmewere nkeịgba ígwèpụtara na ọ bụghị naanị abụba ka ọ na-ere ọkụ: ọ na - ewulikwa mọzụlụ - ọkachasị n'akụkụ ndị na-amị amị, akwara, quads, na ụmụ ehi. Mkpụrụ ahụ dị arọ karịa abụba, ndị mmadụ nwere oke akwara na-erekwu calorie ọbụlagodi mgbe ịnọ jụụ.bọchị 2020
Ọ bụ nnọọ ụzọ magburu onwe ya isi nweta nnwere onwe! Mgbe ahụ, m tụgharịrị 16. Enwetara m ikike ịnya ụgbọ ala, enwere m ohere ịnweta ụgbọ ala ma ugbu a enwere m nkọwa ọhụụ nke ọkụ nnwere onwe, mana ole n'ime unu ga-ekerịta ụdị akụkọ ahụ na akụkọ ahụ na igwe kwụ otu ebe gị? Welie aka gị. Oo chimoo! Ọ bụghị onye ọ bụla.
Taa, mgbe ị gara Facebook, enwere maapụ St. Paul na ndepụta m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla nwere obere ntụpọ na ọdụ ụgbọ elu nke na-ekwu, '@ MSP Airport mgbe m na-aga Chicago''M ga-aga Paris', 'Thezọ gara Timbuktu'. Anyị na-agba mbọ mgbe nile ime ka ibe anyị mata ebe anyị na-aga ma ọ bụ ebe anyị gara.
Anyị ga-ahụkwa foto nke ebe ndị a niile na ụbọchị ole na ole sochirinụ. Anyị makwaara ebe anyị na-aga na anyị maara ebe anyị nọ na anyị maara na anyị maara ebe anyịnya igwe nọ! Anyị maara ebe Danny, Timmy, Tony nọ, anyị maara ebe ha nọ n'ihi na anyị hụrụ igwe kwụ otu ebe na mpụga. Amaara m na nke a bụ obodo sayensị ebe a na ndị na-ege ntị, ikekwe ọtụtụ n’ime unu bụ ndị sayensị, na unu niile hụrụ data n’anya ma hụkwa nnukwu data n’anya, agaghị m enye unu nnukwu data, mana m ga-enye ị a akụkọ ifo w data isi ga-enyere aka ịkpụzi mkparịta ụka anyị na-aga inwe. 600,000 - Nke a bụ ọnụọgụ ndị na-anwụ kwa afọ na United States site na ọrịa zuru oke metụtara mmega ahụ. 33,000 - Nke a bụ ihe na-eme m ka onye nzuzu na-eme.
Nke ahụ bụ ọtụtụ ndị mmadụ! Mgbe ị nụrụ akụkọ ahụ, anyị anaghị anụ ọtụtụ ihe gbasara ya, enweghị oke iwe, n'eziokwu ọ dị ka ọnụọgụ a na-anakwere dabere na anyị anaghị eme ọtụtụ ihe banyere ya. Achọrọ m ịjụ gị ole n'ime ha? You nwetala ndị enyi ma ọ bụ ndị ezinụlọ nwụrụ n’ihi mwakpo nke ndị na-eyi ọha egwu n’ụlọ? Ọ dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, mana mgbe ị nụrụ akụkọ mgbede ị naghị anụ ihe ọ bụla - ihe mberede ụgbọ ala anaghị eme akụkọ ahụ, mana ọ bụrụ na onye ISIS ma ọ bụ al-Qaeda gburu mmadụ, ọ na-agba ọsọ na ọ na-aga n'ihu ụbọchị ole na ole. Ọ bụ akụkụ nke usoro mgbasa ozi 24-hour-atọ.
Nke a bụ ọnụọgụgụ nke otu onye na-efufu mgbe otu afọ gachara njem igwe kwụ otu ebe. 15. Nke a bụ ọnụọgụgụ ndị dọkịta gwara anyị ka anyị were mgbatị ahụ zuru oke kwa ụbọchị.
Mgbe m na-eche banyere mmega ahụ, m na-eche maka ndị mmadụ ịbanye na SUV ma ọ bụ ụgbọala pikọp na-aga mgbatị ahụ, (ọchị) na-agbagharị gburugburu ebe ị na-adọba ụgbọala iji chọta ebe dị nso n'ọnụ ụzọ (ọchị) wee gbagoo onye na-ebugharị ya ha nwere ike iji StairMaster. (Ọchị) Na ka ha nwee ike gbagoo ergometer ahụ. M na-enyo, n'ihi na ị 'm ọchị, na e nwere ụfọdụ eziokwu na ị na-ahụ na ọ na-eme ihe n'eziokwu na-ewute m. 50.
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ. Onye ọ bụla bi na ala ịta ahịhịa mana ọ ga-achọ ibi n'obodo ahụ mana ọ gaghị akwụli ya. Ree ụgbọ ala ahụ, ọ bara uru nnukwu ego 100.
Ugbu a ị nwere ike ị nweta ụlọ $ 100,000 karịa n'etiti etiti obodo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na mpaghara na-eme njem na-eme njem, ebe enwere mmekọrịta igwe kwụ otu ebe, ma nwee ohere ịnweta ihe dị na agbata obi na-ejighị ụgbọ ala. Asatọ. Nke a bụ ego ole euro ha gbakọtara na mba Nordic dị ka nloghachi na ntinye otu euro na akụrụngwa igwe na obodo ha.
Mmetụta gburugburu ebe obibi, mmetụta ahụike na-efu - site na ịkwọ ụgbọ ala na-abụghị ịgba ịnyịnya ígwè - bụ nnukwu nloghachi na itinye ego. Ma ọnụọgụ ikpeazụ 19,000,000.
Ma mgbe akwụkwọ m ma ọ bụ ihe ndekọ m bịara, ahụrụ m na na nleta m gara aga ọ dere, sị: 'Onye nwere ndidi dị obere karịa ka ekwuru'. Ee! (Ọchị) Nke ahụ bụ otu ihe anyị niile chọrọ ịhụ, ọkachasị anyị bụ ndị karịrị afọ 60. Enwere m Ọrịa Crohn Okwu a na - agwa m bụ, 'Duodenal Crohns nwere ọrịa na-enye nsogbu.' O meela ka ndụ m jọọ njọ.
Na 2007, arụ m ọrụ ole na ole na ọrịa ahụ gbasaa ngwa ngwa mgbe emechara m. Na '08 ma ndị dọkịta nọ n'ụlọ ọgwụ Mayo na ndị dọkịta na Virginia Mason Medical Center dị na Seattle kwuru, sị: Ọrịa ahụ na-agbasa dị ka ọ gbasoro, ị gaghị enwe ike iri nri n'ime afọ atọ ruo ise. 'Ọ bụ ezigbo oge nhụjuanya na ndụ m, ọtụtụ oge m riri onwe m na akpa na akara picc.
Sam nwere ihe o chere bụ ịwa ahụ na-azọpụta ndụ ebe a na Mayo Clinic ma ọ nwere ekele maka enyemaka ọ nwetara. Wantedchọrọ ịchọta ụzọ iji nyeghachi site na Crohn's & Colitis Foundation, yabụ kedu ihe ị mere? gbara ịnyịnya ígwè, ọ bụ ezie na oge a, ịnyịnya ígwè ahụ si Seattle, WA; ka Portland, ME. Ndị a bụ ndị mmadụ abụọ na-arịa ọrịa n’oge nsogbu a niile, mana ha kpebisiri ike gafee mba nke ọzọ ma mee nke ọma.
Mgbe ha rutere n’isi nke ọzọ, ha kọrọ na ahụ siri gị ike. Anụrụ m akụkọ na MPR n'oge ụfọdụ gara aga, ọ ga-adị m mma ma m ga-echeta aha nwanyị ahụ. Naanị ihe m chetara bụ na ọ dị afọ iri asaa na abụọ, ya na Dọkịta ya wee tinye ya n’azụ tandem ya wee gaa njem igwe kwụ otu ebe, njem siri ezigbo ike, oge ọ si na igwe kwụ otu ebe pụta, ihe mgbaàmà ya adalatala.
Ha laghachiri usoro nke ụbọchị ole na ole, ya mere ha mere igwe kwụ otu ebe ọzọ wee belata ọzọ. Nwanyị a - ọ dị ka isiokwu ị na-ahụ na ihuenyo ebe a - ha achọpụta na ịgba ịnyịnya ígwè na-ebelata mgbaàmà ma ọ bụrụ na ị nọgide na-eme ya, ị nwere ike ịbụ onye mgbaàmà karịa, ndụ ma ọ bụ ndụ enweghị mgbaàmà n'ihi ọdịdị mgbanwe nke igwe kwụ otu ebe. Ọ bụghị naanị ihe egwuregwu ụmụaka ji atụrụ ndụ, echere m na ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ.
Na 1960s, Amsterdam dị ka nke a: Foto nke ụgbọ ala kpuchiri, e nwere onye na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ bụghị ebe dị mma maka ya ịkwọ ụgbọala, mana ọ nọ na 1960s. Na mbido 1970s enwere ọtụtụ ụmụaka, n'ihi ihe ụfọdụ, ndị ụgbọala na-egbu na Netherlands, yabụ ụmụ nwanyị bidoro mmemme - n'ezie ngagharị iwe - nke akpọrọ 'Kwụsị igbu ụmụaka anyị!' Ọ bụ ozi dị ike nye gọọmentị.
Enwere ndị na-agba ịnyịnya iri isii! Na United States, ọbụlagodi taa, n'otu ebe dịka Minneapolis, nke a na-ahụta dịka obodo nwere omume enyi igwe kwụ otu ebe, ọnọdụ a tụgharịrị. Ì chere na kwụ n’ahịrị na nọmba ụgbọ ala 59 ahụ ga-abụ ihe na-ebelata nrụgide ma ọ bụ na ị chere na ọ ga-abụ nrụgide karịa? - Hapụ onwe gị ka ị bụrụ otu ọgba tum tum ndị na-aga n'okporo ụzọ echebere echekwa, nke ga-eme ka ị rute ebe ị na-aga ngwa ngwa? Ntakịrị nso anyị bụ Detroit, MI; Enweela nnukwu ọganihu na itinye ego na Detroit na afọ ole na ole gara aga, ọkachasị obodo na ime obodo, mana na obodo ahụ ọ dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ochie nke mebiri emebi ma dị njikere ibibi; na n'ọtụtụ mpaghara enwere ụlọ ndị yiri nke a na-adịkwaghị maka ndị mmadụ. Zọ mgbapụ si n'obodo ahụ abụwo ihe ịtụnanya site na ụfọdụ akụkọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị hapụrụ ihe mbụ ma lee anya na obodo nke ise kachasị ukwuu na mba ahụ.
Inwere ike isi ya, ị ga-anụ ya, ịnụ ya ma nwee ike ịhụ ya. Taa, mgbe Jason na-agba ọsọ abalị abalị Monday a, a ga-enwe ọtụtụ puku ndị ọkwọ ụgbọ ala, m ga-anya ụgbọala na nke mbụ ya na Jason na ndị ọrụ a nke mmadụ 3,000 maka otu izu malite Mọnde ma enwere m obi anụrị, nso n'ụlọ, na St. Paul, ebe ahụ, Ozugbo enwere otu ụzọ n'ụzọ anọ - ọ ka bụ otu ụzọ n'ụzọ anọ, echere m - a na-akpọ Rondo.
Ọ bụ agbata obi, ọ bụkwa mpaghara dị egwu, rue mgbe Ngalaba Highway Federal - nke a maara ugbu a dị ka USDOT - bịara wee mee ka Rondo dị ka nke a taa: Nke a bụ Street 94, nke na-agafe n'obi nke St. na-eduga Paul , na oge ọ bụla m na-anya ụgbọala a n'okporo ụzọ awara awara na ọtụtụ ihe banyere ya, obi na-agbawa m n'ihi na amaara m ihe agbata obi Rondo dị, ọ na-ekwughachikwa onwe ya ọtụtụ puku ugboro na United States. Ee, igwe kwụ otu ebe nwere ike igbanwe ndụ na igwe kwụ otu ebe nwere ike igbanwe obodo, mana ụgbọ ala nwekwara ike ịgbanwe.
Ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ iji gaa ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ n'etiti osimiri ahụ na agbata obi Uptown na Minneapolis. Mana ihe dị ịtụnanya karị banyere Midtown Greenway bụ na ọ dọtara ntinye nke onwe. Cheta ọnụọgụ ego asatọ m na-ekwu maka ya na Northern Europe, ọ ga - anọchite nloghachi na itinye ego na euro? Nke a bụ ihe greenway dị ka taa, nke ejiri condos na ụlọ obibi.
Ihe karịrị ijeri dollar abụọ na itinye ego .Mmepụta nkeonwe. N'ihe karịrị puku ụlọ ọhụrụ ọhụrụ 2,000 nke kachasị ewu ewu na Millennials ndị chọrọ ịnya igwe kwụ otu ebe iji rite otu na bb n'ihi na ụgbọ ala ahụ dị oke ọnụ, ụgbọ ala ahụ na-emetọ gburugburu ebe obibi ma ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ, ọ na-enye nsogbu.
2018 synapse nke cannondale
Kedu okirikiri kacha mma maka ụmụ nwanyị?
Key Atụmatụ:Ladmụ nwanyị kacha mmaigwe
Onye edemede Cross Thema (2016) ₹ 28,500:
Trek SkyeỤmụ nwanyị:
Ndụ ND 4 4 (2016) 2016 45,300:
Liv Rove nke 3 DD (2016) ₹ 39,800:
Ugbu a, ka anyị nyefee gị ihe a!
Ha jụrụ na anyị gere ntị na enwetara m ozi na Instagram na-arịọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme edemede banyere igwe kwụ otu ebe ụmụ nwanyị, echere m na ọ bụ isiokwu dị mma ma dịkwa ụtọ. Obi dịkwa anyị ụtọ ịnụ echiche gị na ntụnye gị. Womenmụ nwanyị hà chọrọ ịnyịnya ígwè kpọmkwem maka ụmụ nwanyị? Unu niile na kedu ahụmahụ m? Anọ m ebe a iji zaa ajụjụ ndị a niile.
Igwe na-abịa n'ụdị na nha niile, dịka ndị na-agba ha. Nweghị ike ịkọwa oke 50% nke ndị bi na nwoke na nwanyị naanị, gịnị kpatara anyị ji enwe ndị nwoke na ndị nwanyị? 'Sbikes n'akụkọ ihe mere eme, a na-eme usoro etiti maka ụmụ nwanyị ndị na-agba ịnyịnya ígwè mgbe nile na uwe ogologo, bụ nke na-enweghị isi ka kpakpando uwe gbanwere n'ime ọtụtụ iri afọ. Anyị nọrọ na mkpakọrịta a siri ike n'etiti imewe etiti na okike n'ịgba ịnyịnya ígwè na-enwetaghị ụdị a, mana mgbe ụfọdụ, ọkpọkọ elu ga-enwe oke mkpọda karịa ịsị na etiti ụmụ nwoke ka m ga-amalite na ahụmịhe m n'ịgba ịnyịnya na-enweghị nke a mere? Na m ọkachamara ọrụ, M na mgbe e dere a pụrụ iche inyom bike na mgbe chere dị m mkpa ya.
Ahụ na-adị m mma mgbe niile na igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụrụ na ị lelee webụsaịtị onye nrụpụta a, akpọrọ igwe kwụ otu ebe a dị ka ụmụ nwoke, ọbụlagodi akpọghị ya dị ka ụmụ nwanyị, n'oge a na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè nke gụnyere gravel anyịnya igwe - igwe kwụ otu ebe nwere ụzọ Geometry na dropbars n'echiche m, ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe maka ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị, enwere mgbanwe ị ga - eme iji igwe kwụ otu ebe wee nweta ya kacha mma ka ọ bụrụ oche nwere ike ịnyịnya ibu na ụdị ahụ niile, n'agbanyeghị, ebe ị na-esi igwe kwụ otu ebe, ịkwesịrị ime mgbanwe ndị a iji mee ka igwe kwụ otu ebe dịrị gị mma. Yabụ echiche a bụ ịchọta igwe kwụ otu ebe kachasị dabara gị mma, n'agbanyeghị etu esi ere ahịa ya, ọ bụrụhaala na jiometrị ga-adaba na ọ ga-emezu ebumnuche ziri ezi wee nwee ike ịhazi ya site ebe ahụ ka m wee mara mgbe m nwetara ọhụrụ Igwe kwụ otu ebe. mgbanwe ole na ole m chọrọ ime ka m chọọ 38 pasent gafere na ala ir 138 millimita azuokokoosisi na 170 cranks ma achọpụtara m na ọ gbanwere site igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe nwere ike ịbụ 49 centimeters na mgbe ahụ igwe kwụ otu ebe ọzọ nwere ike ịbụ 51, ọ dị na-agbanwe site igwe kwụ otu ebe gaa igwe kwụ otu ebe na ndị nrụpụta dị iche iche, yabụ kedu ihe na-eme igwe kwụ otu ebe? bia n'ụdị na nha niile na ụlọ ọrụ igwe eji agba ịnyịnya agbaa mbọ imepụta igwe igwe dị iche iche maka onye ọ bụla. Imirikiti ụmụ nwanyị nwere torsos dị mkpụmkpụ na ụkwụ dị ogologo, ụmụ nwoke nwekwara ubu dị warara na obere aka. Akụkụ bụ isi nke igwe kwụ otu ebe ụmụ nwanyị bụ obere osisi nwere obere ọkpọkọ dị mkpụmkpụ nke pụtara na site na sadulu na njikwa ahụ dị obere, nke pụtara na ị Nke a nwere ike ịdị mma maka ụfọdụ ụmụ nwanyị, mana m na-ekwu n'ozuzu m na-ahọrọ ọnọdụ dịtụkwuo ala ma enwere m ogwe aka dị ogologo ma ọ bụ enwere ike iji m maka ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè. na ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè, ma ndị a nwere ike gbanwee n'ụzọ dị mfe, onye ọ bụla ga-ahapụ ụdị aka ha dị iche iche dabere na ụdị ịnya ha, ibu ubu na ihe ị nwere ahụ iru ala karị, igwe kwụ otu ebe na ụmụ nwanyị na-abịakarị na akwa nwanyị ma nke ahụ apụtaghị sadulu a ga-arụrụ gị ọrụ.
Nwere ike ịgbanwe ya ka ọ rụọ ọrụ ka mma maka gị na nkụda mmụọ, ụmụ nwanyị anyịnya igwe na-abụkarị ndị nwere pink ma ọ bụ nwa na-acha anụnụ anụnụ. Anyị achọghị ka anyịnya igwe pink na-acha oji ọ bụ ụzọ ọ ga-aga, mana m na-amasị igwe igwe igwe ugbu a ndị dara m nwere m nwere ike ile anya na ha kwesịrị nwanyị bytes ghara labeled na ihe ọzọ nke mere na ndị mmadụ nwere ike iji ha abụọ ndị nwoke nwere ike na-egbu oge na-eji ụmụ nwanyị anyịnya igwe n'ihi aha, ma cinnamon nwere ike mkpumkpu karịa ndị ọzọ na ndị inyom igwe kwụ otu ebe nwere ike ịka mma na ya Enweghị ihe ọ bụla gbasara igwe kwụ otu nwanyị nke kwesịrị igbochi raketị iji ya, ikekwe ọ dị aghụghọ mana enwere ike ịgbanwee ya ngwa ngwa maka ụmụ nwoke dị mkpụmkpụ ma eleghị anya ụmụ okorobịa nwere ike ịchọta ịnyịnya ígwè ụmụ nwanyị dị mma karịa nke ahụ na njedebe nke ụbọchị Kachasị mma, ọ dabere n'ihe ga-adịrị gị mma ma ọ bụ nwanyị enbike bụ ka nwoke si aga n'ihu wee jiri uru ndị a zụrụ azụ na ụmụ nwanyị kachasị mma n'ụwa jiri Carrion nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ahụkarị Igwe Cameo na Trimble ndị inyom na-eji igwe kwụ otu ebe eme ihe ugbu a, anyị agwala Canyon okwu ma ha kwuru na ọ bụ obere ihe gbasara nwoke na nwanyị na ihe gbasara ịrịgo igwe kwụ otu ebe dabara ma jikwa ndị mmadụ nha, ọkachasị ndị mmadụ na obere njedebe nke ụdịdị dị iche iche ha na-etinye igwe kwụ otu ebe 650 na nnukwu ụlọ ahịa ha nwere okpukpu atọ na okpokoro abụọ-obere-obere okpokolo agba na nke ụmụ nwanyị maka ndị na-agba ịnyịnya site na otu mita na ọkara m na-ede obere okirikiri ụmụ nwoke, mana Emma na-agbago 650b mbipute ị pụrụ ịhụ ebe a, igwe kwụ otu ebe dị 650b dị ka igwe kwụ otu ebe, nke ahụ dị obere karịa obere igwe kwụ otu ebe gị Flight othergrail pụtara na ị ga - enweta 650b pere mpe. Ọ bụ omume ha chere na ọ ga-etolite n'ọdịnihu, obere ihe gbasara nkọwa gbasara nwoke na nwanyị na nhọrọ ndị ọzọ nke ndị na-ere nha ọ bụla anyị gwara di na nwunye ma ha kwuru na ha anaghị eme igwe ụmụ nwanyị, ha na-eme igwe kwụ otu ebe ndị nwere ihu ọma ụmụ nwanyị na-agba. , ndị inyom na-agba ọsọ maka ọrụ ebere WMT ProCycling ejiriwo otu ihe ahụ dị ka ụmụ nwoke nọ na Kadhi Foundation na onye mmeri abụọ na-agafe ụwa Catherine Pendrell nke ndị Cliff Procycling otu anaghị arịọ igwe kwụ otu nwanyị.
Akụkụ kachasị mkpa nke omenala dabara dị ka bea dị na kọntaktị. N'ihi ya, ihe ndị ị metụrụ ihe ị na-ede na-enye aka dị warara maka ubu dị gịrịgịrị, ha nwekwara ogologo steepụ dị mkpụmkpụ ma dị mkpụmkpụ karị maka mkpụmkpụ mkpụmkpụ na ogologo aka, ha nwekwara akara ngosi mmeri nke kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwanyị, na obere na ogologo ndị Cranking Nke a na-esote usoro nke imepụta ụdị dị iche iche dị iche iche na nhọrọ mpaghara iji kwekọọ na mmasị ndị ọzọ na-agba. Na ngwụsị nke ụbọchị, ahọpụtara m igwe kwụ otu ebe nke kachasị gị mma. Dị ka ndị igwe kwụ otu ebe karịrị nke nwoke ma ọ bụ nwanyị, ụfọdụ ụmụ nwanyị nwere ike ịba uru karịa ịnyịnya ígwè ụmụ nwanyị, mana echela na ị ga-achọ ịnyịnya ígwè nwanyị dị oke mma pụọ, ọ nwere ike ịbụ ezigbo nchekwa oge maka onye na-agba ịnyịnya ọhụụ, mana cheta na enwere ụdị na nha dị iche iche na anyị ga-enwe ogologo ubu ma ọ bụ ogologo ụkwụ dị iche iche agbanyeghị okike, gịnị kpatara ya? Gaa na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị ma gbalịa nweta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ nọrọ n'ụfọdụ ịnyịnya ígwè.
Enwere ike gbanwee ihe na kachasị mma. Isi ihe ga - eme ka ịnyịnya ígwè dịkwuo gị mma bụ njikwa aka ziri ezi, dozie onwe gị nke ọma ma jide n'aka na ị nwere ike iru breeki niile na-arụ iji na-achịkwa igwe kwụ otu ebe. Echere m na ị nwere mmasị n'isiokwu a banyere igwe kwụ otu ebe na ụmụ nwanyị na enwere m olileanya na ọ zara ụfọdụ ajụjụ gị GCMapp ọ bụ na anyị chọrọ igwe kwụ otu ebe ụmụ nwanyị, gaa Gianna wee nweta ntuli aka na a ga-eji ha n'agbanyeghị ebe ị si, ha ga-enwe okpokoro na-enweghị geometry ihu oge ọ bụla ha gara eleometri na uche m yeahyeah m ga-enye nke kachasị mma m nwere akụ ndị ọzọ ị nwere ike nweta echere m na nke kachasị njọ bụ maka gị ka ị wee nwee ike ịmegharị ihe ntakịrị ọ bụrụ na ọ ga-adịrị ha mma karịa, mgbe ahụ ikekwe ụzọ aghụghọ dị taa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ifelata, ihe niile ị ga - eme bụ ịmunyekwu calorie ma rie ha oge niile, ị ga - eme nke ahụ ma ọ bụrụ na ị gbanwee nri gị ma na - emekwu ahụ, ọ bụrụ n ’ịme mgbatị ahụ mgbe ahụ ajụjụ na - ebilite bụ egwuregwu bụ Ihe kachasị mma bụ iji gbaa calorie ndị ahụ ọkụ. Anyị atụleelarị ọdịiche dị n'etiti igwu mmiri na ịgba ọsọ na nnwale siri ike ma ugbu a chọrọ ileba ọdịiche dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ịgba ọsọ ka anyị wee nwee ike ịtọlite ​​ihe ntakịrị ka anyị na-aga ụlọ nyocha physiology. N'ebe a na otu ịsa ahụ na anyị ga-agụnye sayensị taa. Anyị họọrọ ịnya ịnyịnya na ịgba ọsọ n'ihi na ha abụọ bụ ihe omume na ala ka anyị wee nwee ike ịmatakwu sayensị na nchịkọta anyị, mana n'ihi na ha abụọ na-ejikarị enyere gị aka ịkwụsị ibu, ee na tupu mgbe anyi jiri onwe anyi tunyere calorie, anyi chere na o ruru ihe oganihu d chere ihe ọghọm nke egwuregwu ọ bụla Rungba ọsọ bụ ibu dị arọ ọ na - enyere osteoporosis aka site na ịkọwa ọkpụkpụ na nkwonkwo s n'aka nke ọzọ ọ na-etinye obere nrụgide na nkwonkwo anyị ma ya mere na-akpata obere ihe mmerụ ahụ.
Ninggba ọsọ na-achọ obere akụrụngwa ma enwere ike ịme ya ebe ọ bụla, mana ịgba ịnyịnya ígwè chọrọ igwe kwụ otu ebe na obere ngwa karịa Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbatị ahụ nwere igwe eji agba agba n'ime ụlọ yabụ enwekwara ụzọ ndị ọzọ, egwuregwu abụọ nwere ike ịbụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, agbanyeghị ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike bụrụ ntakịrị karịa nwere ike mere na a ubé ala osisi ike, i nwere ike n'ezie ugbu a si ikpeazụ ebe Gbaa ịnyịnya a igwe kwụ otu ebe ogologo n'ihi na ọ bụ obere nrụgide. Anyị kpebiri iji calorie dị ka akụkụ nke ahụ anyị n'ihi na ọtụtụ ndị maara nke a, ọ bụ ụzọ dị mfe iji tụọ ike na anyị bụ n'ezie. You ga na-ezo aka na kilocalories, nke mejupụtara otu puku kalori, ebe ọ bụ na nke a bụ ọnụọgụ ị nwetara na aha nri ọ bụla, kamakwa na ndị nyocha ahụike gị, ee ugbu a ọ dị mfe ịhapụ ibu, ị ga - eme ka ị gbakwuo calorie oge niile site na mgbatị gị na ihe ị na-eme kwa ụbọchị, wee rie nri na ihe ọ andụ drinkụ kwa ụbọchị.
N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị lelee otú anyị nwere ike isi tụọ calorie anyị ọkụ.Ugbu a enwere ọtụtụ nhọrọ, mana ụfọdụ ziri ezi karịa ndị ọzọ. Ugbu a ị nwere ike iji onye na-eme kalori calorie dị mfe ma n'ọnọdụ a tinye ogo gị na afọ gị. chọpụta ike ị rụrụ ọrụ na ya, mana ị ga-enweta ọnụọgụ siri ike na ya n'ihi na kalori mgbako chọrọ ịchọpụta ya etu ị siri sie ike, nye gị ihe na-egosi calorie ole ị na-ere ọkụ.
Anyị na-ezu ike na ya, ọ ga-abụ a mma tracker ma ọ bụ a egwuregwu na-ekiri nwere ike ịlele obi gị ọnụego mgbe niile na-eme nke mere na ọ maara ike nke ị na-egosipụta na mgbe ahụ ikpokọta a na onwe onye data echekwara n'ebe ahụ iji nye gị a Inwe ike inyekwu ezi echiche nke calorie Anyị gbara onwe anyị ọkụ na-arụ ọrụ a, yabụ taa anyị ga-aga otu nzọ ụkwụ iji tụọ usoro nri anyị na usoro kachasị atụ, yabụ anyị ga-aga ụlọ nyocha iji hụ kpọmkwem ihe nke ahụ pụtara. Anaghị m ege ntị ọzọ, daalụ maka iji ụlọ nyocha gị na oge gị taa anyị chọrọ ileba mmefu calori na ịgba ịnyịnya anya anya na achọrọ m ịma etu anyị ga-esi mee nke ahụ na otu anyị nwere ike isi tụọ ebe a. anyị ga-atụle ikuku oxygen nke a na-akpọkarị vo2 na ndị na-ebe a vo2 max, mana nke a ga-abụ nke obere. Ọ bụkwa oke ikuku oxygen ị na-eji eme ihe ike, ma dabere na nke ahụ, na nkwenye ole na ole ị nwere ike ịzụ mmefu calorie na nke ahụ dịgasị iche dabere na ebumnuche gị na gị na-arụ ọrụ yana anyị nwere oge dị ukwuu taa ma ọ bụrụ anyị kwesịrị ịhọrọ ụdị ọkwa abụọ iji chọpụta ihe onye nkuzi kachasị mma, echere m maka ihe ịchọrọ ime taa n'ihi na ị doro anya na ịchọrọ ile anya ọkwa ndị mmadụ nwere ike ijikwa ka anyị wee nwee ike ịkwa anyị 2, ezigbo mgbatị ahụ ikekwe Ọkwa 4, yana mgbatị dabere na mgbatị ahụ nwere ike ịbụ mpaghara nke ndị mmadụ ga-echekwa maka oge ha oge, ma ị na-eme, mgbe anyị na-eme nha vo2 ị ga-ahụ nnukwu ọdịiche dị na nri Oxygen site na mgbanwe site na-agba ọsọ na-agba ọsọ dịkwa mma, kwa maka okwu ọ bụla, achọrọ m mgbanwe na ọsọ, gu obi dị m ụtọ ịhụ nsonaazụ mụ na Heather nwetara site na ịlele calorie anyị ọkụ ka m na-agba ọsọ ma na-agba ịnyịnya. ng na-esikwu ike n'ọnụ ụzọ ya na mpaghara 4, mana m ga-etinye onwe m na ikike ikuku na mpaghara m iji mee ka ike sie ike Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ịgba ọsọ na-ere ọkụ karịa calorie karịa ịgba ígwè ka anyị wee nwee ike ịchọpụta ma nke a ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ndịiche dị n’etiti ịnyịnya ígwè na ịgba ọsọ zuru ezu, oge eruola maka Jonathan ka ụfọdụ mee ngụkọta oge wee gbakọọ cardio pooh maka ọrụ anyị dị iche iche n anyị nwetara ume anyị n’azụ Jonathan Achọrọ m ileba anya na ọnụọgụ nke mbụ. kedu ka calorie m si esi na ịgba ịnyịnya ígwè pụta na-agba ọsọ mgbe anyị lere ya anya maka otu elekere mgbe anyị na-agba ọsọ maka otu elekere ọ bụ ihe dị ka calorie 900 91 otu awa wee Viking 868 dị mma, yabụ nke ahụ bụ ihe dị iche banyere 124 na ahịrịokwu ahụ gụọ ọnụ nwere ntakịrị ọnụọgụ dị elu nke mere na ihe kpatara ya bụ ihe doro anya na ọ dị ntakịrị karịa ka ọ na-eri obere karịa ya na usoro ike ike ị na-atụ anya na ọ ga-adị elu, yabụ nke ahụ bụ 1156 na-agba ọsọ na 994 site na ịnya igwe, yabụ ihe dị iche bia o Obere ihe na 212.
Echere m na ọ dị mma ịsị na anyị abụọ chere na ịgba ọsọ ga-ebute ụzọ nke obere nnwale anyị ebe a, nke o mere, n'ihi na ihe omume ịkụ nzọ ọka nke egwuregwu ahụ na eziokwu ahụ bụ na ọ dị nso na ịgba ịnyịnya ahụ zuru oke bụ na o nwere uru a, ma ịgba ígwè nwere ike ime ogologo oge karịa ma ọ bụrụ na ịnwe oge dị ukwuu n'akụkụ gị, ọ nwere ike ịka mma iji ịgba ịnyịnya gbaa ọtụtụ calorie, mana echere m na ịgba ọsọ bụ ụzọ kachasị mfe maka m ifelata, n’otu aka n’ihi na ọ na-egbochi agụụ m, n’otu aka n’ihi na mgbe m nwetara ihe dị ka nke a, m na-a coffeeụ kọfị na achicha mara mma mgbe niile, nke ugbu a adịghị njọ ma ọ bụrụ na ị nwere otu n’ime Egwuregwu ndị a ma ị nwere ike ịdị njikere ịnwa tufuo obere ibu biko mee ka anyị mara ma biputere ya na nkọwa ka anyị wee nwee ike ịnụ maka ya. Enwere olile anya na ị nwere mmasị na edemede anyị biko biko nye mkpịsị aka gị aka karịa Findchọta ụwa niile na ihuenyo ma chọọ isiokwu ndị ọzọ niile anyị mere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu anyị mere banyere calorie na-efunahụ, Ọtụtụ puku n'ime ha, anyị na-atụ egwu isiokwu a ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ntụnyere dị n'etiti igwu mmiri na ịgba ọsọ mgbe a bịara n'ihe oriri calorie ị nwere ike ịchọta ya ebe a n'okpuru
Kedu otu m ga-esi họrọ igwe kwụ otu ebe?
Womenmụ nwanyịnwere ikehọrọn'etiti aỤmụ nwanyịụzọ a kapịrị ọnụigwe kwụ otu ebe, ma obu uzo unisexigwe kwụ otu ebe. Ọtụtụigwe kwụ otu ebeụdị na-akọ data na-egosiụmụ nwanyịnwee sorter nku ala (ogwe aka ogologo) na nkezi ma e jiri ya tụnyere ndị nwoke toro ogologo. Ya mere,ụmụ nwanyị anyịnya igwena-adịkarị mkpụmkpụ na elu tube, iji kwado maka nke a.Ọnwa Ise 4, 2016
Linggba ígwè kwa ụbọchị ọ dị njọ?
Cygba ígwènwere ike inyere gị aka ichebe gị pụọ n'ọrịa ndị dị egwu dị ka ọrịa strok, nkụchi obi, ụfọdụ ọrịa cancer, ịda mbà n'obi, ọrịa shuga, oke ibu na ọrịa ogbu na nkwonkwo. Na-agba ịnyịnyaigwe kwụ otu ebeahụike, ahụike na ụdị mmega ahụ dị mkpụmkpụ maka afọ niile.Cygba ígwèdị mfe dabara n'ime gịkwa ụbọchịeme site na togba n'ụlọ ahịa, ogige, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ.
Ọsọ ịgba ume na-agba abụba?
Kama, were ajiri nwayọọ, ma ogologo njem otu ugboro n'izu, karịsịa n'oge mmalite. Ogologo njem (ruo awa isii)ọkụọtụtụ n'imeabụbama nye gị ezigbo ntachi obi maka oge a kara aka. Cheta, ọbụna 30 nkeji nkeịgba ígwè nwere ikeenyere gi akaidaibu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga ike.05.25.2021
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji adọrọ mmasị?
2. Ọ bụ sayensị:Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ekpo ọkụ. Otu nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya gosiri nandị na-agba ígwèndị toro eto na Tour de France na-ahụta karịamara mmakarịa ndị ọzọ na-eme egwuregwu - na nke kacha elu 10 pasent nkendị na-agba ígwè'Dị ihe dị ka pasent 25 ọzọmara mmakarịa pasent 10 nke kasị ala. ” Eleghi anya ngwa ngwa bụ ọgaranya ọhụrụ?Ndị na-agba ịnyịnya ígwèdị mma.10.04.2014
Any nwere ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè na UK?
Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị bi ugbu a ma na-eku ume ịgba ịnyịnya ígwè, enweghị ịhụnanya a maka ihe omume ntụrụndụ mgbe niile wee bido otu echiche na mgbochi nwere ike iwepụ gị. Gụọ akụkọ sitere n'aka ụmụ nwanyị a maka mmụọ nsọ n'ụzọ ndị ị ga-esi merie egwu gị. Kedu ihe na-akpali gị?
Kedu ihe na-akpali akpali ime ka ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè ọzọ?
Kedu ihe na-akpali gị? Na Machị 2013 British Cycling kwupụtara ebumnuche iji nweta otu nde ụmụ nwanyị ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe site na 2020. Kemgbe ahụ ihe karịrị ụmụ nwanyị 800,000 agbamume ka ha bido ịgba ịnyịnya ígwè, agbanyeghị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agakarị bụ ụmụ nwoke (ma e jiri ya tụnyere mba ndị dịka Denmark ebe ndị nwoke na-agba ịnyịnya nwoke akaụntụ maka 47% na ndị ịgba ịnyịnya ígwè ụmụ nwanyị 53%).
Ebee ka m nwere ike zụta ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè na ntanetị?
Wmụ nwanyị na-agba ịnyịnya uwe - shop - Gemụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè - Primal Wear Wemụ nwanyị na-agba ịnyịnya uwe na ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè dị na PRIMAL - ebe anyị na-emepụta uwe ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè emere maka ndị na-agba ịnyịnya nke oge a - maka ụzọ ma ọ bụ ụzọ.